Setan Ọ̀ Dị Adị n’Eziokwu?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Mam Maya Mazatec (Huautla) Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uruund Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Zande Zulu
Ihe a kpụrụ akpụ dị na Madrid, Spen, nke na-egosi na Setan bụ mmụọ ozi a chụturu achụtu
“Anọ m na El Salvadọ too. Ọ na-abụ m mee isi ike, mama m asị m: ‘Ekwensu ga-abịa jide gị.’ M na-asị ya: ‘Ya bịawanụ!’ Ama m na e nwere Chineke, ma Ekwensu adịghị.”—ROGELIO.
Ì chere na ihe a Rogelio kwuru bụ eziokwu? Olee nke i chere bụ́ eziokwu n’ihe ndị e dere n’okpuru ebe a?
Setan adịghị adị. Ọ bụ ihe ọjọọ dị ndị mmadụ n’obi.
Setan dị adị. Ma o nwechaghị ihe gbasara ya na ndị mmadụ.
Setan bụ mmụọ dị ike. Ọ na-akpa ndị mmadụ aka ọjọọ.
Nke ọ bụla n’ime ihe atọ a nwechara ndị kwetara na ọ bụ eziokwu. Ndị nke ọ bụla n’ime ha ruru ọtụtụ nde mmadụ. Ọ̀ baara mmadụ uru ịchọwa ịmata nke bụ́ eziokwu? Ọ bụrụ na Setan adịghị adị, ihe ọ pụtara bụ na e duhiela ndị kwetara na ọ dị adị. Ọ bụrụ na ọ dị adị, ma ya abụrụ na o nweghị ihe gbasara ya na ụmụ mmadụ, ọ pụtara na egwu ọtụtụ ndị na-atụ ya abaghị uru. Ma, ọ bụrụ na Setan bụ onye dị adị nke na-aghọgbu ndị mmadụ, ihe ọ pụtara bụ na e kwesịrị ize ya eze karịa otú ọtụtụ ndị chere.
Ka anyị leba anya n’Akwụkwọ Nsọ iji mata azịza ajụjụ ndị a: Setan ọ̀ bụ ihe ọjọọ dị ndị mmadụ n’obi, ka ọ̀ bụ mmụọ dị adị? Ọ bụrụ na ọ bụ mmụọ dị adị, ò kwesịrị ka i zewe ya eze? Ọ bụrụ na i kwesịrị ize ya eze, olee ihe ị ga-eme ka ọ ghara imemila gị?